चार वर्षको प्रेमपछि प्रतिभा घिमिरे र क्रिकेटर सोमपाल कामीको बिहे (भिडियो) - Sidha News
चार वर्षको प्रेमपछि प्रतिभा घिमिरे र क्रिकेटर सोमपाल कामीको बिहे (भिडियो)
काठमाडौँ । क्रिकेटर सोमपाल कामीले चार वर्षअघि प्रतिभा घिमिरेलाई प्रेम प्रस्ताव राखेका थिए। प्रतिभाले जवाफ दिन झन्डै दुई साता लगाइन्। सन् २०१६ मार्च महिनाका ती दुई साता सोमपालको निम्ति दुई जुनी बराबर भयो। त्यसपछि प्रतिभाले जे जवाफ दिइन्, त्यसले यो जोडीलाई जुनी-जुनीको निम्ति एकअर्कासँग बाँधेको छ।
दुई साताको पर्खाइपछि जब प्रतिभाले प्रेम प्रस्ताव स्वीकार गरिन्, सोमपाललाई ‘जिन्दगीकै सबभन्दा ठूलो म्याच जितेजस्तो’ खुसी भयो। त्यही खुसी बिहीबार दोब्बर हुँदैछ, जब उनीहरू चार वर्षको प्रेम सम्बन्धलाई विवाहले अझ कसिलो पार्दैछन्। ‘राम्रो साथीलाई जीवनसंगिनी बनाउन पाउँदा बढी नै खुसी लाग्ने रहेछ,’ विवाहको पूर्वसन्ध्यामा आफ्नो खुसी साट्दै सोमपालले भने।
प्रतिभा पनि आफूले माया गरेको मान्छेसँग सम्बन्ध गासिँदा घरि हर्षित र घरि भावुक हुन्थिन्। सोमपालकै जस्तो भावमा उनले भनिन्, ‘हाम्रो प्रेम विवाहमा परिणत हुँदैछ। निकै रमाइलो लागिरहेको छ।’ सोमपाल र प्रतिभाको भेट पाँच वर्षअघि भएको थियो। सोमपालले नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमबाट ‘डेब्यू’ गरेको वर्षदिन बित्दै थियो। उनी सन् २०१५ को सुरूआतमा धनगढीमा आयोजित एसपिए कप खेल्न गएका थिए। त्यति बेला उनले बुटवलको न्यू होराइजन टिमका लागि उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका थिए।
नेपाली क्रिकेटका उदाउँदा खेलाडी सोमपालका प्रशंसकहरू बढ्दै थिए। समर्थकको भिडमा एसपिए कपको सुरक्षा गर्न आएका एक सुरक्षाकर्मी पनि थपिए। उनले सोमपाललाई आफ्नो घरमा खानाको निम्तो दिए। सुरूमा त सोमपालले पन्छाउने कोशिस गरे। निकै कर गरेपछि ‍राजी भए। खाना प्रस्ताव गर्ने सुरक्षाकर्मी धनगढी, अदालत रोडको जुन घरमा डेरा बस्थे, त्यो घर प्रतिभाको थियो। प्रतिभा त्यो बेला बिदामा उतै थिइन्।
ती सुरक्षाकर्मीले ‘क्रिकेटर सोमपाल कामी खाना खान आउने’ कुरा सबैलाई सुनाइसकेका रहेछन्। ‘सुरूमा त दाइको कुरा मैले पत्याइनँ। राष्ट्रिय क्रिकेटर हाम्रो घरमा खाना खान के आउलान् जस्तो लागेको थियो,’ प्रतिभाले त्यो क्षण सम्झिइन्। बाँकी सेतोपाटीले तयार पारेको यस भिडियोमा हेर्नुहोस:
देउवाले राष्ट्रपतिलाई ‘तिमी’ भनेकामा ओलीले दुखाए चित्त (भिडियोसहित)
बीटीएस गीतले राख्यो युट्युव कीर्तिमान, २४ घण्टामै ११ करोड ३० लाख पटक हेरियो
स्वास्थ्यमन्त्रीको दाबी : सरकारले हातखुट्टा केहि छाडेको छैन !
को हुन् शृंखला खतिवडाको प्रेमी ? आफ्नो प्रेम सम्बन्धबारे पहिलो पल्ट यसरी खुलाईन सबै कुरा (भिडियो )
सपनाले सम्मानित भएपछी देवघाटमा पुगेर पनि यसरी बेवारिसे श’वको अन्त्यष्टि गरिन्
बिवाहमा डोली चढ्नुअघि खुब रोईन श्वेता, आफन्तको पनि चल्यो रुवाबासी (भिडियो)
भाडा तिर्न नसकेर कोठाबाट निकालिएका पल शाहले हार खाएर गाउँ फर्कन लागेको दिन सम्झिए
अभिनेत्री नम्रता श्रेष्ठ र प्रकाशको भिडियोले मच्चायो तहल्का